Dowladda somaaliya oo ka hadashay geerida Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur cadde – Al-Hurriyah
Wasiirka Warfaafinta XFS mudane, Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa Ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyeeyay geeridii naxtinta lahayd ee ku timid Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Allaha u naxariistee , Nuur Xasan Xuseen (Nuur cadde) oo saaka ku geeriyooday Magaalada London ee Dalka Ingiriiska.
Wasiirka Warfaafinta ayaa ku tilmaamay Nuur cadde in uu ahaa halyeey usoo shaqeeyay Ummadda Soomaaliyeed xilli adag.
Allaha u naxariistee Nuur cadde ayaa labadii Todobaad ee lasoo dhaafay la xanuunsanayay cudurka Corona virus, isagoo ku jiray Isbitaalka Kings College eek u yaalla Magaalada London.
Magaalada beydhabo ee xarunta gobalka baay waxaa kulan ku yeeshay golaha wasiirada maamul gobaleedyada…
Roobab iyo Dabeylo Jaray Isgaarsiintii Degaano Ka Tirsan Puntland ayaa Geystay Qasaaro
Muqdisho December, 07 2019 (Al-Hurriyah News): Wararka ka imaanaya puntiland ayaa sheegay in degaano ka tirsan maamulkaasi ay ka de.een roobab dabeylo wata kuwaasi oo dhaliayay khsaaro badan . Ilaa hada in kastoo aan la soo sheegin khasaaro nafeed laakiin Roobka…
-Wasaaradaha caafimaadka ee heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa maanta ka kulan ku saabsan dib u eegista lagu sameeyay xermooyinka caafimaadka aasaasiga ah ee dalka ku yeeeshay magaalada Muqdisho. Soo bandhigidda Dib u eegista lagu sameeyay xermooyinka…